Iprofayile yeNkampani-iShenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd.
I-Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd ifumaneka kwiSithili sasePingshan, Shenzhen, ecaleni kweHong Kong neMacao, kunye nezithuthi ezifanelekileyo. Inkampani yinkampani yamashishini aphakamileyo aphucukileyo anenkqubela phambili yokuvelisa, ukuvelisa kunye nentengiso yebhetri yeLithium Ion, Pack kunye nesisombululo sebhetri. Inkampani yasekwa ngo-2008, igubungela ummandla oziimitha ezisibhozo zeekhilomitha. Okwangoku inkampani inabasebenzi abangaphezu kwe-1600, ngaphezu kweqela le-QC eliyi-110 kunye neqela lobugcisa abangama-60. Yonke inkalo yemveliso ukusuka ekuthengweni kwezinto ezingafunekiyo ukuya kuthunyelo lweemveliso ezigqityiweyo ibekwa esweni ngabasebenzi beQC. Ngoku sinesebe leebhetri cylindrical, iphakheji ethambileyo (Li-polymer) yesebe yebhetri, Pack yebhetri kunye nesebe lenkqubo yolawulo. Ukuvelisa iiseli ze-18650 kunye ne-14500 zeLithium ion iiseli ukuya kuthi ga kwi-200,000Ah ngemini. Sisebenzisa ubuchwepheshe obuphambili kunye nezixhobo, iindlela zokulawulwa kwezesayensi ze-ISO 9001 kunye neendlela eziphuculweyo zokuqonda, ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuqina kwemveliso. Iimveliso zebhetri zeSOSLLI zamkelekile ngokubanzi kubathengi behlabathi. Sisebenza ngokusondeleyo nabathengi ukubonelela ngokhuseleko, ubomi bomjikelo omde, iimveliso zebhetri ezingabizi kunye neenkonzo. Abathengi bethu bayaxhamla kwiimveliso ezibanzi zeSOSLLI kunye nokubanakho kobuchwephesha kwibhetri ye-E-bhayisekile, ibhetri yamandla, ibhetri yokugcina amandla, ibhetri 3C yezimbiwa kunye nebhetri eyenziwe ngokwezifiso. Imveliso esetyenziswa kakhulu kwiifowuni ze-smart phone, ilaptop, izixhobo ezinokutshintshwa, izixhobo ze-IoT, iikhamera zedijithali, iimveliso zeBluetooth, iimveliso zokukhanyisa, i-GPS, i-DVR, i-E -igarethi, i-E-toothbrush, i-E-toys, ibhanki yamandla, amandla e-UPS, idreyini ephezulu. I-RC UAV kunye neeRobhothi, i-AGV, isixhobo samandla, izixhobo zonyango, njl.
I-SOSLLI idlulise i-ISO 9001: i-2008 esemgangathweni yenkqubo kunye ne-ISO 14001 yokuqinisekiswa kwenkqubo yendalo esingqongileyo, iimveliso zethu zebhetri zifunyenwe i-UL, i-CB, IEC 62133, i-CQC, i-CE, i-RoHS, isiqinisekiso se-KC sogunyaziso, kunye nesetifikethi esimalunga nezothutho kunye nengxelo ye-MSDS, i-UN38.3, Ingxelo yovavanyo lwaselwandle nolomoya, njl njl.
I-SOSLLI yayineenkqubo eziphambili zokwenza ibhetri, ikhabhathi yokuguga, isixhobo sokuvavanya i-BMS, izixhobo zokuvavanya iipakethi ze-li-ion ezikhoyo, umatshini ozenzelayo ozenzekelayo, umatshini othobela isixhobo ngokuzenzekelayo kunye neziko lovavanyo. Iziko lokuvavanya le-SOSLLI linokufezekisa: uvavanyo lokhuseleko, uvavanyo oluphezulu nolusezantsi, uvavanyo lokusingqongileyo, uvavanyo lwengozi kunye novavanyo lwe-acupuncture, uvavanyo lokuyeka. Kukho amaqela angama-R&D angama-80 epesenti iinjineli eziphezulu kumashishini ebhetri ngaphezulu kweminyaka eli-10. Iziko lophando kunye nophuhliso ligubungela umbane, ulwakhiwo, umbane, ubuchwephesha bePack, PV, njl.
Ukubonelela ngeSOSLLI i-OEM kunye ne-ODM yeemveliso zeebhetri kunye nezisombululo. Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwishishini lezomkhosi, unyango, ezemali, unxibelelwano, ezokhuseleko, ezothutho, ukumbiwa kwemigodi, izinto zokugcina impahla, indawo yokugcina izinto kunye nezixhobo zombane.
Sakha ubudlelwane obuhle beshishini kunye nePanasonic, iPhilips, i-Samsung, i-voltronicpower, i-Mindry, i-BOSCH, i-DJI, iLinde, njl njl abathengi basekhaya nabangaphandle. Ibhetri yethu inokhuselo lwangempela lokusingqongileyo, ukhuseleko, ubomi obude, amandla aphezulu awodwa.
I-SOSLLI izamela iqonga lamazwe onke ukubonelela ngebhetri yenkonzo enye yokumisa. Wamkelekile undwendwelo kwaye unxibelelane nathi.
Iiseli zebhetri zeLithium Ion, I-20ah iLithium Ion ibhetri, Ibhetri yamandla eLithium, Ipakethi yebhetri yamandla, Ipakethi yeBhetri yeLithium, I-3.6v ibhetri yeLithium-Ion,